1 Samoela 19 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (1Sam 19)
[Ny nifonan'i Jonatana ho an'i Davida, sy ny nitadiavan'i Saoly indray hahafaty azy, ary ny nandosiran'i Davida nankany amin'i Samoela] Ary Saoly niresaka tamin'i Jonatana zanany sy tamin'ny mpanompony rehetra ny amin'izay hahafaty an'i Davida. Fa Jonatana, zanak'i Saoly, kosa tia dia tia an'i Davida.
Ary nalain'i Mikala ny sampy, dia napetrany teo amin'ny farafarany, ka nosaronany makarakara volon'osy ny lohany, dia norakofany ny lamba izy.[Heb. terafima]
Ary Saoly naniraka ny olona hizaha an'i Davida indray ka nanao hoe: Ento miakatra atỳ amiko amin'ny farafara izy hovonoiko.
Dia niditra ny iraka, kanjo, indro, ny sampy no teo am-parafara, ary voasaron'ilay makarakara volon'osy ny lohany.[Heb. terafima]
Dia nankany Naiota any Rama Saoly, ary tonga tao aminy koa ny Fanahin'Andriamanitra, dia nandroso izy sady naminany teny am-pandehanana ambara-pahatongany tany Naiota any Rama.Ary nanaisotra ny fitafiany koa izy ka mba naminany tahaka ny sasany teo anatrehan'i Samoela, ary izy nandry nitanjaka mandritra iny andro sy alina iny. Koa izany no nanaovan'ny olona hoe: Saoly koa moa mba isan'ny mpaminany?
1 Samoela 19:1
1 Samoela 19:2
1 Samoela 19:3
1 Samoela 19:4
1 Samoela 19:5
1 Samoela 19:6
1 Samoela 19:7
1 Samoela 19:8
1 Samoela 19:9
1 Samoela 19:10
1 Samoela 19:11
1 Samoela 19:12
1 Samoela 19:13
1 Samoela 19:14
1 Samoela 19:15
1 Samoela 19:16
1 Samoela 19:17
1 Samoela 19:18
1 Samoela 19:19
1 Samoela 19:20
1 Samoela 19:21
1 Samoela 19:22
1 Samoela 19:23
1 Samoela 19:24